यी मतदान केन्द्र जहाँ सम्हाल्दै छन् महिलाले |
यी मतदान केन्द्र जहाँ सम्हाल्दै छन् महिलाले
प्रकाशित मिति :2017-12-06 16:47:09
काठमाडौं । यही बिहिबार हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि सबै केन्द्रहरुमा कर्मचारीहरु खटिइसकेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ । आयोगका अनुसार निर्वाचनका लागि ७ हजार ७ सय ५२ स्थलमा लागि १५ हजार ३ सय ४४ मतदान केन्द्रका लागि १ लाख ७५ हजार कर्मचारी खटिएका छन् ।
४५ जिल्लाका १५ हजार ३ सय ४४ मतदान केन्द्र मध्ये केहि मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी महिलाले लिएका छन् । जहाँ अधिकृतदेखि सहयोगीसम्म महिला कर्मचारीहरु खटिएका छन् ।
झापाको पाँच मतदान केन्द्रमा सबै महिला कर्मचारी छन् । निर्वाचन क्षेत्र नं २, ३ र ५ नं निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृतदेखि सहयोगी कर्मचारी समेत महिला छन् । यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नंं २ को बिर्तामोड नगरपालिकामा रहेका दुई मतदान केन्द्रमा सबै कर्मचारी महिला छन् । नगरपालिका (क) केन्द्रमा मतदान अधिकृत नमूना निरौला दाहाल र (ख) केन्द्रमा सुनिता आचार्यसहितका महिला कर्मचारीले मतदान गराउँदैछन् ।
निर्वाचन क्षेत्र नं ३ मा रहेको मेची रंगशालाको (क) र (ख) केन्द्रमा पनि महिला कर्मचारीले मतदान गराउँदैछन् । (क) केन्द्रमा मतदान अधिकृत गीताकुमार राई र (ख) केन्द्रमा अम्बिका श्रेष्ठ मतदान अधिकृत तोकिएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत खिलाराज रेग्मीले जानकारी दिए ।
क्षेत्र नं ५ को दमक नगरपालिका केन्द्रमा भने जमुना कार्कीको टोलीले मतदान गराउँदैछ । झापामा पाँच हजार ५३६ कर्मचारी र दुई हजार ६४ स्वयंसेवक गरी सात हजार ६०० कर्मचारी निर्वाचनका लागि खटाएका छन् ।
यस्तै दैलेखका दुई वटा मतदान केन्द्रमा महिला मात्र कर्मचारी खटिएका छन् । दैलेखको नारायण नगपालिकास्थित त्रिभुवन मा.वि. मतदान स्थलका दुई केन्द्रमा मतदान अधिकृतसहित सबै कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी महिला खटिएका हुन् ।
त्रिभुवन मा.वि. मतदान केन्द्र ‘क’ मा महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवाली र ‘ख’ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयकी नासु दुर्गा खनाल मतदान अधिकृत रहेका छन् ।
महिला सक्षम छन् भन्ने विश्वाससाथ दुई केन्द्रमा महिलामात्रै खटाइएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका सहायक निर्वाचन अधिकृत रमेश श्रेष्ठले बताए । ‘यसलाई नमुना मतदान केन्द्रका रूपमा लिइएको छ ।’ उनले भने, ‘व्यवस्थापनमा सहज होस् भनेर नजिकैका केन्द्रमा महिला कर्मचारी खटाइएको हो ।’
यस्तै इलामको रुक्मिणी विद्यालय मतदान केन्द्रमा महिला कर्मचारी मात्र खटाइएको छ । रुक्मिणी केन्द्रमा अधिकृतदेखि सहयोगीसम्म महिला कर्मचारीलाई मात्र खटाइएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
मतदान केन्द्र महिलामैत्री र नमुना बनाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यलयले महिला कर्मचारीलाई मात्रै खटाएको हो ।
रुक्मिणी मतदान केन्द्रमा एकजना मतदान अधिकृत, एकजना सहायक मतदान अधिकृत, चारजना सहायक कर्मचारी र दुईजना सहयोगी महिला नै नियुक्ति गरिएको छ ।
गोलाप्रथाबाट मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत छनौट गर्दा महिला मात्रै छानिएका सहायक निर्वाचन अधिकृत जगदिश्वर भट्टराईले बताए ।